Rio Ferdinand oo ka hadlay suurtogalnimada uu Frank Lampard ku noqon karo tababaraha cusun ee Chelsea – Gool FM
(London) 24 Juunyo 2019. Halyeeyga kubadda cagta England iyo kooxda Manchester United isla markaana falaqeeye ka ah shabakada BT Sport ee Rio Ferdinand ayaa aaminsan in Chelsea iyo Frank Lampard midba midka kale ay isku baahan yihiin, kaddib markii ay soo baxeen warar la xiriirinaya inuu noqon doono tababaraha Blues ee xili ciyaareedka soo socda.
Macalinka reer Talyaani ee Maurizio Sarri ayaa ka tagay shaqada tababarka ee kooxda Chelsea wuxuuna ku biiray Juventus, Frank Lampard ayaana ah kan ugu dhow ee leylin doono Blues xili ciyaareedka soo socda.
Hadaba halyeeyga Ferdinand ayaa ku sheegay boggiisa rasmiga ah baraha bulshada ee Instagram-ka.
“Frank Lampard qaado shaqadan, Chelsea wey kuu baahan tahay”.
Yeelkadeeda, Derby County ayaa dhankeeda waxay u soo bandhigtay tababaraha kooxdeeda ee Frank Lampard mushaar uu bishii ku qaadan doono £ 4 milyan oo ginni si ay kaga hor istaagto inuu u dhaqaaqo Chelsea.
Frank Lampard ayaa lagu tiriyaa mid ka mid ah ciyaartoyda ugu fiican ee soo martay kooxda ka dhisan Galbeedka magaalada London ee Chelsea, waxaana sidoo kale loo tix galiyaa inuu yahay gooldhaliyaha ugu sareeya ee kooxda inkastoo uu ka ciyaarayay Khadka dhexe.